Karaiba · Novambra, 2007 · Global Voices teny Malagasy
Karaiba · Novambra, 2007
Tantara mikasika ny Karaiba tamin'ny Novambra, 2007
Vondronosy Karaiba: Ny Fanehoam-pankasitrahana
Amerika Latina 23 Novambra 2007
Dia mitohy ihany ny fitantarana ireo fomba aman-danonana manerantany. Ao anatiny indrindra ny any Etazonia amin’izao fotoana izao. Dia resaka momba ny fomba avy any indray no resahintsika na dia ny any amin’ny nosy manodidina aza no ho tantaraina etoana. Mety hoe fialantsasatra mahazatra ny Amerikana Tavaratra ny Thanksgiving (androm-panehoam-pankasitrahana)...
Dôminika : Tazo Denga (tohiny)
Dominika 01 Novambra 2007
Ny blaogy Living Dominica [Anglisy] dia mitantara fa mbola avo ny voka-dratsin'ny tazo denga any amin'ny nosy sasantsasany any Karaïbà. [Ity dia mbola tohin’ilay lahantsoratra efa notaterina teto ihany : Tazo Denga] Janine Mendes-Franco